स्टेनली मेयर हाइड्रोजन पानी ईन्धन एचएचओ इंजेक्टर एचएचओ किट एचएचओ ग्यास भिडियो - एचएचओ कारखाना
घर > अनुसन्धान > स्टेनली मेयर हाइड्रोजन पानी ईन्धन HHO इंजेक्टरहरू HHO Kit HHO ग्यास भिडियोहरू
वर्णन ईन्धन कोषले उद्देश्यपूर्ण रूपमा पानीलाई यसको घटक तत्वहरू, हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजित गर्दछ। त्यसपछि हाइड्रोजन ग्यास जल उत्पादन गर्न जलाइएको थियो, यो प्रक्रियाले पानीको अणुहरूको पुनर्गठन गर्‍यो। मेयरका अनुसार उपकरणले इलेक्ट्रोलिसिस गर्न कम ऊर्जा चाहान्छ जुन परम्परागत विज्ञानले पूर्वानुमान गरेको वा नापेको न्यूनतम उर्जा आवश्यकता भन्दा पनि कम हुन्छ। कार्य संयन्त्रमा "ब्राउन ग्यास", अक्सीहाइड्रोजनको मिश्रण २: १ अनुपातको साथ तरल पानी जस्तै समान संरचनाको संलग्न रहेको आरोप लगाइएको थियो; जुन परिवेश वायु (नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रि रेडिकल / इलेक्ट्रोन, विकिरण, र अन्यमा) सँग मिसाइनेछ। यदि उपकरणले निर्दिष्टको रूपमा काम गरेमा, यसले थर्मोडायनामिक्सको पहिलो र दोस्रो कानून दुवैलाई उल्ल .्घन गर्ने छ, सदाका लागि चलिरहेको मेसिनको रूपमा सञ्चालन अनुमति दिन्छ। स्रोत: विकिपेडिया, नि: शुल्क ज्ञानकोश
यो पानी ईन्धन सेल "को एक प्राविधिक डिजाइन होस्थायी गति अमेरिकी स्टेनली एलेन मेयरले बनाएको मेसिन (अगस्ट २,, १ 24 1940० - मार्च २०, १ 20 1998))। मेयरले दावी गरे कि उपकरणसँग पुनःप्राप्त एक अटोमोबाइलले पेट्रोलको सट्टा पानी प्रयोग गर्न सक्दछ। मेयरको उनको "पानी ईन्धन सेल" र कारको बारेमा दाबी यो संचालित ओहियो अदालतले १ 1996 XNUMX in मा जालसाजी भएको पाए।
शब्द "ईन्धन सेल"
आफ्नो प्याटेन्ट भर मेयरले "ईन्धन सेल" वा "पानी ईन्धन सेल" भन्ने शव्दहरू प्रयोग गरे जुन उनको उपकरणको अंशलाई बुझाउन प्रयोग गर्दछ जुनमा हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न पानी पानीबाट बित्दछ। मेयरले यस अर्थमा यो शब्दको प्रयोग गर्नु भनेको विज्ञान र ईन्जिनियरि in्गको सामान्य अर्थको विपरित हो, जसमा त्यस्ता कक्षहरू पारम्परिक रूपमा बोलाइन्छ "इलेक्ट्रोलाइटिक सेलहरू". यसबाहेक, शब्द "ईन्धन सेल"रसायनबाट बिजुली उत्पादन गर्ने कोशिकाको लागि आरक्षित हुन्छ redox प्रतिक्रिया, जबकि मेयरको ईन्धन सेलले बिजुली खपत गर्‍यो, जुन उसको पेटेन्टमा र सर्किटमा देखाइएको छ। मेयरले १ 1990 XNUMX ० को पेटेन्टमा "पानी ईन्धन सेल असम्ब्ली" को प्रयोगको वर्णन गर्दछ र उनको "इन्धन सेल पानी कप्यासिटर" का केही चित्रहरू चित्रण गर्दछ। पेटेन्टका अनुसार यस अवस्थामा "" ईन्धन सेल "शब्दले पानी कपिसिटर सेल समावेश भएको आविष्कारको एकल इकाईलाई जनाउँछ ... जसले आविष्कारको विधि अनुरुप ईन्धन ग्यास उत्पादन गर्दछ।"
पानी ईन्धन सेल
ओहायो टिभी स्टेशनको एक समाचार रिपोर्टमा, मेयरले उनको पानी ईन्धन कोशिका द्वारा संचालित भएको दाबी गरेको झुग्गी बग्गी प्रदर्शन गरे। उनले अनुमान गरे कि लस एन्जलसदेखि न्यु योर्कसम्म यात्रा गर्न २२ अमेरिकी अमेरिकी ग्यालन (liters 22 लिटर) पानी मात्र चाहिएको थियो। यसबाहेक, मेयरले "इन्जेक्टरहरू" द्वारा स्पार्क प्लगहरू प्रतिस्थापन गरेको दाबी गरे जसले इन्जिन सिलिन्डरहरूमा हाइड्रोजन / अक्सिजन मिश्रण ल्याए। पानीलाई विद्युतीय अनुनादको अधीनमा राखियो जसले यसलाई यसको मूल आणविक श्रृंगारमा विघटन गर्‍यो। पानी ईन्धन कोषले पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यासमा विभाजन गर्दछ, जुन पछि शुद्ध ऊर्जा उत्पादन गर्न परम्परागत आन्तरिक दहन इञ्जिनमा पानीको बाफमा फेरि मिलाउन सकिन्छ।
फिलिप बल, शैक्षिक पत्रिका मा लेखन प्रकृति, मेयरको दावीलाई छद्मविज्ञानको रूपमा चित्रित गर्दै, "यो स्थापित गर्न सजिलो छैन कि मेयरको कार कसरी काम गर्‍यो, बाहेक यसमा इन्धन कोष पनि सामेल छ जुन पानीको तत्वलाई पुनः संयोजित गरेर छुट्याएको भन्दा कम ऊर्जा प्रयोग गरेर पानी विभाजित गर्न सक्षम थियो ... "छद्मविज्ञानको बिरूद्ध क्रुसेडरहरूले आफूले चाहे जति सबै उग्र र क्रुद्ध गर्न सक्छन्, तर अन्तमा उनीहरूले यो पनि स्वीकार्न सक्छन् कि पानीको दन्त्यकल्पित ईन्धनको रूपमा कहिल्यै मिल्दैन।"
आज सम्म, मेयर उपकरणहरूको कुनै पियर समीक्षा समीक्षा वैज्ञानिक साहित्य मा प्रकाशित गरिएको छैन। पत्रिका मा एक लेख प्रकृति मेयरको दावीलाई एक "इन्धनको रूपमा पानी" मिथकको रूपमा वर्णन गरिएको छ।
१ 1996 XNUMX In मा मेयरलाई दुई लगानीकर्ताले मुद्दा हानेका थिए जसलाई उनले डिलरशिप बेचेका थिए, वाटर ईन्धन सेल प्रविधिमा व्यवसाय गर्ने अधिकार प्रदान गर्दै थिए। उनको कारलाई विशेषज्ञ साक्षी माइकल लाफ्टन, लन्डन विश्वविद्यालयको क्वीन मेरीको इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंगका प्रोफेसर र रोयल एकेडेमी अफ इन्जिनियरि .का फेलोले जाँच गर्ने थियो। यद्यपि, मेयरले प्रोफेसर लाफ्टनलाई परीक्षाको दिनमा “ल exc्गडा बहाना” ठानिन् र परीक्षा अगाडि बढ्न दिएन।मेयरका अनुसार टेक्नोलोजी पेटेन्ट पेन्डिंगमा रहेको छ र प्याटेन्ट अफिस, ऊर्जा विभाग र सेनाले अनुसन्धान गरिरहेको छ।[उद्धरण आवश्यक छ] उनको "पानी ईन्धन सेल" पछि तीन विशेषज्ञ साक्षीहरूले जाँच गरे[कसले?] अदालतमा जसले पत्ता लगाए कि "सेलको बारेमा कुनै क्रान्तिकारी केही थिएन र यसले केवल परम्परागत इलेक्ट्रोलाइसिस प्रयोग गरिरहेको थियो।" अदालतले मेयरले "घोर र नराम्रो धोखाधडी" गरेको फेला पारे र उनलाई ती दुई लगानीकर्तालाई २$,००० डलर तिर्न आदेश दिए।
स्टान्ले मेयर अचानक २० मार्च, १ 20 1998 on मा एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर मरे। उनका भाइले दाबी गरे कि दुई जना बेल्जियम लगानीकर्तासँग एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट गर्दा मेयर अचानक बाहिर दौडिए र "तिनीहरूले मलाई विष दिए"। एक अनुसन्धान पछि, ग्रोभ सिटी पुलिस फ्रान्कलिन काउन्टी कोरोनर रिपोर्ट संग गए जहाँ उच्च रक्तचाप मेयर, एक सेरेब्रल एन्यूरिज्मको कारण मरे भनेर आदेश दिए। मेयरका केही समर्थकहरू विश्वास गर्छन् कि उनको आविष्कारहरू दबाउनको लागि उनको हत्या गरियो।
मेयरको पेटेन्टहरूको समयावधि सकियो। उनका आविष्कारहरू अब सार्वजनिक डोमेनमा छन्, कुनै रोकावट वा रोयल्टी भुक्तान बिना प्रयोग गर्न सबैको लागि उपलब्ध। कुनै ईन्जिन वा वाहन निर्माताले मेयरको कामलाई समाहित गरेका छैनन्।
पानी ईन्धनको कार
(पानी ईन्धनको कारबाट पुनःनिर्देशित)
A पानी ईन्धनको कार एक अटोमोबाइल हो जुन काल्पनिक रूपमा पानीबाट सीधै यसको उर्जा प्राप्त गर्दछ। पानी ईन्धनको कार धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पेटन्ट, अखबार र लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका लेख, स्थानीय टेलिभिजन समाचार कभरेज, र वेबसाइटहरूको विषय भएको छ। यी उपकरणहरूको लागि दावीहरू छद्म विज्ञान पाइएको छ र केहि लगानी धोखाधडीमा बाँधिएको पाए। यी सवारी साधनहरूले पानीमा ईन्धन उत्पादन गर्न कुनै अन्य ऊर्जा इनपुट बिना दावी गर्न सक्दछन् वा एक संकरले दाँत परेको छ कि यसको केही ऊर्जा पारम्परिक स्रोत (जस्तै पेट्रोल जस्ता) बाट पानीबाट निकालिन्छ।